Dhagxaan cusub oo lagu gooyay wadooyin soo gala magaalada Muqdisho
Home Wararka Dhagxaan cusub oo lagu gooyay wadooyin soo gala magaalada Muqdisho
Iyada oo shacabka ku dhaqan magaalada Muqadishu ay ku jireen xalaada adag oo ciriir galisay nolol maalmeedkoodii ayaa hadana waxaa hada loogu daray in dhagxaaan lagu gooyo wadooyinka soo gala magaalada Muqadisho. Ciidanka Booliska ayaa dhagxaan shub ah ku xiray wadooyin soo gala magaalada Muqdisho.
Waxaa lagu arkaayay wadooyinka soogala magaalada Muqadishu dhagxaan waa weyn oo lagu xirayay wadooyinka dhax mara xaafada Galmudug ee ku dhegan Xerada Asluubta, waxaa sidoo kale dhagxaan lagu xiray laamiga Ex-Control Afgooye.
Dadka degan xaafadaha dhagxaanta lagu xiray ayaa Warbaahinta u sheegay in maalmahan socdeen talaabooyin ay Hay’adaha amaanka ku xirayaan qaar kamid ah wadooyinka xaafadahaasi oo dhagxaan adag lagu jarayay. Wadooyinkan cusub ee la xiray ayaa saameyn ku yeelanaya dadka aagaasi degan.
Dhanka kal xariga wadooyinkaan cusub ayaa waxa ay keenayaa in shacabka u soo shaqo taga magaalada Muqadisho ee ka yimaado Muqadsho banaankeeda ayan imaanin Muqadisho, halka kuwa badecada keenana ay ku adkaan doonto in ay beedeecadooda u iibgeeyaan Muqadisho.
Previous articleSarkaal xalay lagu dilay duleedka Magaalada Muqadishu
Next articleWasiir Axmad Ciise Cawad oo dhawaan shaqada laga ceyrin doono!